Kygo A11 / 800, ny fanafoanana audio indrindra [Review] | Vaovao momba ny gadget
Manohy mamakafaka ireo vokatra tianao ho fantatra ireo izahay. Fantatsika fa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny headphones True Wireless isika, na izany aza, mbola misy mpampiasa vitsivitsy izay manana kalitao sy fahaleovan-tena. Headphones headband dia mbola eo an-tsena, Saingy mba hanavahana ny tenany dia mila misafidy fampiononana sy haitao avo lenta izy ireo, ary izany indrindra no nataony ary raha tena mendrika izany izy ireo.
Kygo miaraka amin'ny A11 / 800, angamba ny tabilao mandroso indrindra amin'ny fanafoanana ny headphone eny an-tsena sy ny feo avo lenta, nohalalininay mba hahafantaranao amin'ny fomba lalina ny fomba fiasan'izy ireo.
1 Volavola sy fitaovana: Minimalism ary adihevitra kely
2 Ny fanafoanana ny tabataba feno indrindra hitako
3 Ny fampiharana dia sanda fanampiny
4 Fahaleovan-tena, asa ary toetra teknika
5 Ny traikefan'ny mpampiasa sy ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Volavola sy fitaovana: Minimalism ary adihevitra kely
Tanjona fa ny Kygo Life A11 / 800 dia headphones tsara tarehy. Manana iray miaraka amin'ny fototra polycarbonate izahay izay niteraka resabe. Polycarbonate dia maharitra kokoa noho ny toa azy, raha ny marina dia mirona hamolavola fa tsy vaky, ka antoky ny faharetana izany. Na izany aza, tsy dia mahatohitra firy intsony izy io, ary ny fahatsapana plastika amin'ny headphones amin'ny vidiny iray dia manala karazana mpampiasa iray. Marina fa ny fiheverana voalohany dia toy izao, fa isika izay mahalala an'ity karazana fitaovana ity dia mahafantatra fa sady tsy mora no tsy ratsy.
lanja: Gramin'ny 250
Ny fanitsiana dia azo hatsaraina, saingy manana singa mekanika be dia be amin'ny haavon'ny aforitra. Mihodina manodidina ny 90º eo ho eo ny earbud tsirairay ary mihorona mivelatra. Manana fonosana vita amin'ny hoditra mitovy amin'ny fehiloha ambony sy amin'ny sofina izahay, izay ahazoana aina ary manangona ny sofina tanteraka. Manana tontonana mikasika ny earphone vita amin'ny kodiarana ankavanana izahay izay ahafahantsika mifanerasera amin'ny mpilalao, ary koa bokotra telo (ANC - ON / OFF - AWS) amin'ny earphone tenany ary Taratra LED ho an'ny fitaovana fihainoana tsirairay koa. Ho an'ny fifandraisana dia manana ny Jack 3,5mm ho an'ny seranan-tsambo tsara sy USB-C ampiasaina amin'ny famandrihana finday havia. Mazava ho azy fa ny fehiloha dia azo lava ary misy chassis metaly ao anatiny.
Ny fanafoanana ny tabataba feno indrindra hitako
Manana bokotra misy fanafoanana ny tabataba izahay, na izany aza, tena ilaina ny mametraka ny fampiharana Kygo Sound (Android/iOS) afaka mankafy ny endri-javatra rehetra. Ny fanafoanana ny tabataba dia avo lenta fotsiny, tonga lafatra ary eo amin'ny haavon'ny marika ekena toa an'i Sony amin'ny resaka fanafoanana mahazatra, fa… ahoana raha mila zavatra bebe kokoa isika? Ity fanaingoana rehetra ity dia manome ny fanafoanana ny tabataba amin'ireo Kygo A11 / 800:
Fanafoanana tanteraka ny tabataba: Ny mozika ihany no henointsika
Fomba fampahafantarana: Manafoana 50% ny tabataba manodidina sy 100% ny feon'olombelona
Mode manodidina: Izy io dia misambotra ny feo ety ivelany ary mamela antsika hiresaka na dia mihaino mozika aza, toa ara-bakiteny miaraka aminao ny mozika ary tsy manana headphone ianao.
Ohatra, ny mandeha amin'ny fitateram-bahoaka toy ny metro, ny fanafoanana tanteraka ny tabataba dia manoka anao tanteraka, fa tsy misy soso-kevitra hafa noho izy "Mode ambient" hidina an-dalambe nefa tsy iharan-doza. Sambany nisy fanafoanana ny tabataba lasa tena manokana ary manome tanteraka izay ampanantenainy isaky ny maody, ahoana no anaovanao azy? Toa majika io.
Ny fampiharana dia sanda fanampiny
Ny Kygo Life A11 / 800 dia tsy vita raha tsy nametraka ilay rindranasa ianao. Ny rindranasa dia tsy dia misy ifandraisany loatra amin'ny vokatra toy izao, ary toa nianatra zavatra be dia be avy tamin'ny Sonos namany izy ireo tamin'ity. Ny fampiharana dia sanda fanampiny izay mampiakatra ny Kygo Life A11 / 800 ho amin'ny kalitao farany, ny fanaingoana tanteraka ary ny asa maro izay tsy fantatrao fa nilainao mandra-panandramanao azy.
Ny sary EQ dia ahafahanao manitsy ny karazana feo araka izay itiavanao azy nefa tsy mila manilika ireo EQ mahazatra. ary izany dia ankasitrahana amin'ny haavon'ny fahatsorana sy ny fiasa. Manana rafitra fanaingoana tsotra ihany koa izahay hanovana ny anaran'ny fonenantsika, kitiho ary vonoy ny fomba fanafoanana ny tabataba isan-karazany ary fantaro amin'ny antsipiriany ny fizakantena sisa tavela. Na eo aza izany, ny fampiharana dia tsy ilaina hahalala, ohatra, ny fizakantena, satria azo jerena ao amin'ny menio accessories an'ny iPhone ohatra.
Fahaleovan-tena, asa ary toetra teknika
ireo Kygo Life A11 / 800 mihoatra ny feo izy ireo, manandrana manolotra traikefa. Ohatra iray ny hoe manana rafi-pamantatra izy ireo izay mijanona ary mamerina mozika mandeha ho azy rehefa esorinay / apetrakao izy ireo, eny, toy ny AirPods. Nefa mbola mandeha lavitra kokoa izany, manomboka amin'ny ananan'izy ireo Bluetooth 5.0 handefa feo sy hitsitsiana angovo, toa azy ireo ihany NFC, izay hamela azy ireo hifandray amin'ny fitaovana Android amin'ny alàlan'ny fitondrana ny sofina havanana amin'ny mpamaky smartphone.
Fahatsapana: 110 ± 3dB
Fahita matetika (± 3dB): 15 Hz - 22 KHz
mifanaraka miaraka amina aptX, aptX LL ary endrika AAC
Na izany aza, teboka mifandraika amin'izany ny fizakan-tena. Manana bateria 950mAh izahay, izay afaka manome playback hatramin'ny 18 heny amin'ny alàlan'ny Bluetooth ary amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny tabataba no iasana, mitondra antsika hatramin'ny 38 ora raha tsy mampiasa zavatra hafa ankoatry ny tariby (Mampidi-doza izaitsizy!). Mba hanomezana vola azy ireo dia mampiasa ny USB-C izahay ary naharitra adiny 2 teo ho eo izahay, izay tsy fohy. Mikasika ny fizakan-tena, mazava ho azy fa toa tsy misy olana ny headphones ary amin'ny zavatra niainako dia mandrakotra ny angon-drakitra ataon'ny mpanamboatra izy ireo, zavatra iray izay tsy dia fahita loatra eto amin'ity tsena ity koa.
Ny traikefan'ny mpampiasa sy ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Volavola maivana sy milamina
Ny fanafoanana ny tabataba miorina amin'ny endri-javatra tsara indrindra efa hitako
Nametraka haingana izy ireo ary manana endri-javatra taonina
Fahaleovan-tena tsy mampino
Mety tsy hanome ny fiheverana tsara indrindra ny fitaovana
Ny fantsona dia misy lagika
Be ny raharaha, angamba kitapo ho tsara kokoa
Izaho dia tia headphones True Wireless, mpampiasa mahatoky ny AirPods, ary hitohy izany. Na izany aza, rehefa mipetraka eo amin'ny solosaina aho mba hiasa na rehefa mandeha dia, ireto Kygo Life A11 / 800 ireto no miakatra eo afovoany. Izy ireo dia manana ny fanafoanana ny tabataba be mpampiasa indrindra ezahako hampiaraka ary mahazo aina miaraka mandritra ny ora maro aho. Ao anatin'ny tsena finday "premium" amin'ity sokajy ity (tsy audiophiles manokana) no ahitako mpifaninana vitsivitsy amin'ny kalitaon'ny feo ary tsy misy amin'ny resaka habetsaky ny fiasana efa vita.
Ny teboka ratsy Ny zavatra hitako, na eo aza ny fiarovako ny polycarbonate, dia ny fahatsapana ampitain'ny fitaovana sy ny mety aminy. Nahita tara kely ihany koa aho tamin'ny valiny natolotry ny touchpad fanaraha-maso multimedia ary toa diso toerana sy mampatahotra ahy ny bokotra herinaratra sy ANC. Amin'ny lafiny ratsy, manana rindranasa izay tena rendrarendra izahay, fahaleovan-tena mahatalanjona, kalitao feo avo lenta ary fanafoanana ny tabataba be pitsiny indrindra sy feno indrindra izay notadiaviko daty. Raha tianao azonao atao ny mahazo azy ireo amin'ny 249,00 ary miaraka amin'ny antoka tsara indrindra ao Ity rohy ity. Na dia ho hitanao ihany koa ireo écouteur ireo amin'ny teboka mivarotra toa an'i El Corte Inglés.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Kygo A11 / 800, ny fanafoanana audio indrindra [Review]
Ahoana ny fomba handefasana ireo mailaka Gmail ho azy